Shilalekha » महिला लघुवित्तको आईपीओ ९ लाख बढिले भरे, माग कति ? महिला लघुवित्तको आईपीओ ९ लाख बढिले भरे, माग कति ? – Shilalekha
महिला लघुवित्तको आईपीओ ९ लाख बढिले भरे, माग कति ?
२ फाल्गुन २०७७, आईतवार १८:५०
काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तिय संस्थाको आईपीओमा ९ लाख बढि आवेदकले भरेका छन् । आइतबार ५ बजेसम्ममा आईपीओ ९ लाख ६३ हजार ८६८ वटा आवेदनबाट करिब साढे १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ ।
लघुवित्तको उक्त आईपीओमा फागुन ५ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ।